Wargayskii "Dalka" ee ku Hadala Afka Dawladda oo Hormuud u noqday ku xadgudubka Xuquuqda Qoraalda iyo Wararka
Cabdi Xasan /Muqdisho
Maanta waxaa shaaracyada magaalada Muqdisho lagu qaybinayay Joornaalka "Dalka" ee ku hadla afka dawladda gaar ahaan dhinaca Madexweyne Cabdillaahi Yuusuf, iyadoo uu ahaa bilaash oo aan lagu waydiinayn wax lacag ah. Haddaba mar aan isha la raacay ayaan waxaan garowsaday in uu ka Gedisan yahay Joornaalada kale oo xagga daabacaadda uu ka tayo roonyahay wargaysyada qaarkood, maadaama lagu soo daabacay wadanka aynu dariska nahay ee Kenya. Wargayska Dalka oo aan nagu cusbayn oo dawladihii ragaaday ee tii Cali Mahdi iyo tii Cabdi qaasim uu mid waliba intuu rafanayay dadka kaga gadi jiray fikradaha uu wato; markii Dambena la nuxuusayay si libdhidka dawladahaas aan sii shaqayn.
Wargayska Maanta lagu soo daadshay magaaladan Muqdisho waxuu kuwii hore uga gedisan yahay isagoo si xad dhaaf ah u bililqaystay Qoraalada iyo Sawirada lagu soo bandhigo Shaashadda Internetka gaar ahaan kuwa ku hadla soomaaliga. Waxaa kaaga sii darrane Wargayska oo xitaa aan xusin meelaha uu kasoo xigtay amase uu warka kasoo qaatay, ayadoo qoraalada qaarkood aad ku arkaysid warkii oo sidii uu ugu jiray websityada lagu soo qoray wargayska lagana tagay uun magacii Netka amase wariyihii soo tabiyay.
Hore Wargayska Dalka waxuu lahaan jiray tafatire iyo wariyaal haba yaraadeene warka u qora, laakiin maanta waxaa ka dhadhansan kartaa Joornaal uu soo daabacay hal qof oo ka tirsan xukuumadda, balse aan fahamsanayn cawaaqib xumada ay leedahay Minguurintu, ayna yarayn karto kasbashada dadka daalacanaya, waayo maanta soomaalida badankeedu waxay si toosa ula socdaan wararka, Maqaalada iyo sawirada ku soo baxa ilaha Websityada iyo Netka.
Ku dheeraan mayno Xuquuqda qoraalada oo mahade haka gaadhee waxaa si cilmiyaysan oo faahfaahsan noogu soo bandhigay Inj. Maxamed Cali Aden oo ilaa 2003 aanu ka daalcanaynay linkiga Somalitalk www.SomaliTalk.com/copyright , Waxaase la yiri Geel waayeelkiisu durdurinayo maxaad ka filin Aarankiisa. Dawaladdu waa inay tusaale u noqota carbinta iyo toosinta habsimi u socodka Qoraalada iyo saxaafadda kana digtoonaataa Bililiqaysiga dad kale qoraaladood, kuna dhiirigelisaa dhalinta hadda u jeesatay wax qoridda iyo wariyinimada sidii loogu abuuri lahaa barnaamijyo tababareed oo aan ku dhisnayn dhan u xaglinta kana dheeraadaan ku xadgudubka xuquuqda qoraalada iyo wararka, balse haddii la noqdo waxaan jeclahayna dadka waan ka gadin waxaan doonana dadka kale qoraaladooda iyo wararkooda waa bililiqaysan natiijadeedu waa uun hal bacaad lagu lisay oo halkii Warfaafineed waxay usi bedelin been faafin iyo natiijo la'aan.
Weli ma Dhegeysatey Waraysigii Sannadka ee Cabdi Sheikh Bahalow